eSancharpati | » नेपाल फेरि एउटा राजनीतिक संकटमा फसेको छ- प्रा. एसडी मुनी नेपाल फेरि एउटा राजनीतिक संकटमा फसेको छ- प्रा. एसडी मुनी – eSancharpati
नेपाल फेरि एउटा राजनीतिक संकटमा फसेको छ- प्रा. एसडी मुनी
एजेन्सी । ओलीको कदमको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेपछि सबैले त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिरहेको अवस्था छ। पहिलेभन्दा अहिले एउटा कुरा फरक देखिएको छ।
आफ्नो सत्ता हल्लिनुमा ओलीले यसपटक भारतलाई दोष दिएका छैनन्। उनले आफूलाई सरकार सञ्चालनमा असहयोग गरेको आरोप आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुतर्फ सोझ्याएका छन्। अर्को पक्षले ओलीलाई कुशासन, भ्रष्टाचार र शक्ति केन्द्रिकरणमा लिप्त रहेको आरोप लगाएको छ।
त्यसैगरी ओलीले आफूहरुसँग गरेको सत्ता साझेदारी उल्लंघन गरेको पनि उनीहरुको आरोप छ। यसपटक भारतले आफ्नो कार्ड निकै सचेतताका साथ र कुशलतापूर्वक खेलेको छ। चीनले निकै होशियारीपूर्वक बनाएको आफ्नो अहस्तक्षेपको अनुहारमा यसपटक भने आफैंले हिलो छ्यापेको छ। सत्तारुढ दलका आन्तरिक गतिविधिको मिहीन व्यवस्थापन गर्न खोजेपछि उसको सो अनुहार उदांगिएको हो।
ओलीविरोधी शक्तिहरु उनलाई अब ठेगान लगाउने भनेर उत्साहित देखिन्थे। तर अस्तित्वको लडाइँमा छट्पटाइरहेका ओलीलाई जब भारतले विस्तारै सहयोगी हात अघि बढायो अनि उनीहरु असफल भए। अहिलेसम्मका यी कदमहरुबाट भारतले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य हासिल गरेको छ।
आफ्नो पार्टी नै फुटाएर भए पनि सरकारमा टाँसिइरहने साहस ओलीमा थपिएको छ। यस क्रममा, ओलीको अवसरवादी र राजनीतिकरुपमा लक्षित भारतविरोधी राष्ट्रवादको पर्दाफास भएको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता र दबदबा ध्वस्त भएको छ। र, उसको संरक्षकको रुपमा रहेको चीनसामु लज्जास्पद स्थितिको सिर्जना भएको छ।
यी घट्नाक्रमहरुसँगै भारतले हटाइसकिएको राजतन्त्रको नेतृत्वमा हिन्दूवादी शक्तिहरुलाई पनि सहयोग र उत्साहित गरिरहेको छ। नेपालमा अब राजनीतिक शक्तिहरुबीच बन्न लागेको नयाँ समीकरणको दृष्टिकोणका आधारमा संभवतः यो चाल चालिएको होला। यस अर्थमा, भारत अब नेपालमा नयाँ चुनाव गराउने पक्षमा खुलेर लागेको देखिन्छ। यी सबै घट्नाक्रमबाट के देखिन्छ भने भारत नेपालका अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अवसरवादी खेलाडीहरुको पक्षमा उभिएको छ।
यो कदमलाई साउथ ब्लकका रणनीतिकारहरु ठूलो उपलब्धी हासिल गर्नका लागि चुकाउनुपर्ने सानो मूल्यको रुपमा व्याख्या गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको व्यवहारिक पक्षले जहिले पनि छिमेकमा आफूसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध भएको शक्ति नै सत्तामा होस् भन्ने चाहन्छ। यो एउटा स्थापित मान्यता नै हो। नेपालमा मित्रतापूर्ण र आफूले भनेको सहजै मान्ने सत्ता होस् भनेर बेलाबेला भारतबाट ठूलो लगानी गरिएको छ।
भारतले सन् १९५० को सन्धि, कालापानी सीमा विवाद र व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी थाँती रहेका विवादास्पद विषयहरु पनि उठान गर्नसक्छ। ती विषयमा भारतले नेपाललाई स्पष्टरुपमा रातो घेरा तोकेर तिमीले यो घेरा चाहिँ पार गर्नुहुँदैन भनेर भन्नुपर्छ। नेपालमा चीन अहिले पक्कै पनि राजनीतिक र आर्थिकरुपमा निकै फैलिएको छ।
तर चीनका बन्दरगाहबाट पारवहन सुविधा दिने र रेलवे नेटवर्क विकास गर्ने जस्ता उसका अधिकांश प्रतिवद्धता राजनीतिकरुपमा मात्र प्रेरित छन्। बीआरआई परियोजनासम्बन्धी चीनकै विज्ञहरुले पनि यसका कतिपय परियोजना आर्थिकरुपमा संभव र टिकाऊ नै नहुने बताएका छन्। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनलाई पनि अझ आफैं डुब्न दिऊँ। त्यसपछि भारतले आफ्नो रणनीतिक ठाउँमा पुनः दाबी गर्न अझ सहज हुनेछ।
हिन्दुस्तान टाइम्स साभार